Chief Caaqil Cumar Abdullah Oo Soo Bandhigay Qorshe Qeexitaan Oo Laga Sameynayo Wabiga Jehlum
Cumar wuxuu bilaabay qorshe qashin-jabinta Jehlum
'Xukuumadda oo ka Shaqeysa Mashruuc Difaaca Fatahaadda'
Baramulla, Mar 24: Isagoo iftiiminaya lagama maarmaannimada u diyaarsanaanta wax ka qabashada dhacdooyinka iyo masiibada, Madaxa Xafiiska Cumar Sabtiga wuxuu sheegay in daadadku ay had iyo jeer u horseedeen khatar nolosha iyo hantida Gobolka. Wuxuu sheegay in ifafaale wareegyada daadadku ka muuqdeen Gobolka ka dib kala go ’joogto ah wuxuu ku baaqayaa in fiiro gaar ah la yeelo si loo qaado tillaabooyinka looga baahan yahay.
“Waa inaan si buuxda diyaar ugu nahay oo aan uga feejignaano khataraha daadadkeena si aynaan ula qabsanin waqtiga degdegga ah”, ayuu raaciyay isagoo kahadlaya howl kadib furitaanka qorshaha Rs 21.38 crore Scheme ee Jati, Duabgah iyo Ningli ee degmada Baramulla. maanta.
Cumar Cabdullaahi wuxuu sheegay in dowladdu ay ka shaqeyneyso mashruuc ballaaran oo lagu ilaalinayo daadadka si kor loogu qaado awoodda qaadashada wabiyada waaweyn, xoojinta lacagaha, dib u soo nooleynta dariiqyada fatahaadda isla markaana soo bandhigaan tallaabooyin muddada fog iyo kan muddada-dheer ah isagoo intaa ku daray in howl-gallada qulqulka ah ee wabiga Jehlum ay qayb ka yihiin istiraatiijiyaddan.
“In kasta oo aan ku qanacsanahay dhisidda buundooyinka, wadooyinka, iskuulada, kuliyadaha, rakibaada bixinta biyaha iyo qorshayaasha kale ee horumarineed ee la midka ah maadaama tasiilaadkaasi yihiin kuwo shacabka u adeegsanaayo laakiin marka aan abuurnay ilaalinta daadadka sida tas-hiilaadka waxaan ilaahey ka baryeynaa in aynaan noqon. ku qasbay in la isticmaalo tallaabooyinkan ”, ayuu yiri isaga oo culayska ka saaray diyaargarowga iyo feejignaanta maamulka iyo dadka si ay ula kulmaan caqabadaha dabiiciga ah.
Madaxa ugu sareeya ayaa sheegay in muhiimada qulqulka webiga Jehlum lagu arki karo aragtida xaqiiqada ah in Dredger kii ugu horeeyey uu bilaabay Raiisel Wasaaraha India markii uu joogay Baramulla qaar kamid ah sanadihii 60.
Waxay ahayd xiligii uu hogaaminayey Sheikh Muhammad Abdullah in Dredger kii ugu horeeyey uu daahfurey Raiiselwasaarihii Hindiya ee waqtigaas Jawahar Lal Nehru howsha qodista ayaa sii socotey 1959 ilaa 1986. Qorshahan hada waxaa dib u soo nooleeyey Wasiirka ugu sareeya mar kale maanta iyadoo uu joogo Wasiirka loogu talagalay PHE, Waraabka iyo Xakamaynta Daadka, Taj Mohi-ud-Din iyo Wasiiru Dowlaha R&B, Javid Ahmad Dar.
Cumar C / llaahi wuxuu sheegay in isbahaysiga dowlada laga soo bilaabo maalinti ay xafiiska la wareegeen ay diirada saareyso dhamaan horumarka gobolka iyo u diyaarsanaanta wax ka qabashada masiibooyinka iyo hanjabaada loo soo diray mid ka mid ah waxyaabaha walaac weyn leh. Wuxuu bogaadiyay Taj Mohi-ud-Din sida ay ugu adeegsadeen tamarta cusub ee waaxda PHE, Waraabka iyo Fatahaadaha Fatahaadaha isagoo intaa ku daray in Wasiirka uusan soo noolayn oo kaliya qorshooyinkii hore iyo mid faafinta laakiin uu bilaabay kuwo cusub qaybtan.
Isaga oo tixraacaya horumarka magaalada Baramulla, Cumar Abdullah wuxuu sheegay in uu ka codsaday Madaxa Horumarinta Degmada in ay diyaariyaan qorshe hawleed isla markaana ay u aasaaso mashaariic horumarineed oo dhameystiran oo magaalada Baramulla ay diiradda saareyso hagaajinta iyo casriyeynta magaalada gaboobay.
"Jiritaanka lacagtu wax caqabad kuma noqonayso arrintan," ayuu yidhi isagoo raaciyay in dawladdu ay daneyneyso inay casriyeeyso hanaanka horumarka ee magaalada. Muujinta ku qanacsanaanta ka bixitaankii Buundada Jati inkasta oo ay qarash ku bixiyeen Rs. 2 crores dushiisa, Wasiirka Amniga wuxuu sheegay inuu ka codsaday waaxda ay quseyso inay diyaariyaan mashruuc dhameystirka buundada.
Isaga oo ka hadlaya munaasabada, Wasiirka PHE, Waraabka iyo Xakamaynta Fatahaada, Taj Mohi-ud-Din ayaa sharraxay astaamaha muuqda ee Qorshaha Kala-goynta iyo faa'iidooyinka ay u leedahay in wax laga qabto khataraha daadadka.
Wasiirka ayaa ku amaaney Dowlada UPA inay siisay lacag loogu tala galay mashruucan wuxuuna ku amaaney doorka firfircoon ee Wasiirka uu ka qaatay soo aruurinta lacagaha xarunta. Wuxuu kaloo tafaasiil ka bixiyey tallaabooyinka kale ee looga hortagayo daadadka ee hadda ku jira dhuunta oo uu horay uga bilaabay Gobolka.
Wuxuu sheegay in howlaha nabaad-guurka ah ee hawlgallada laba Dredges ay bilaabi doonaan laga bilaabo maanta si loo daadgureeyo 14 lakh cum sedum iyo kaydinta wabiga Jehlum laga bilaabo Ningli ilaa Baramulla oo ka mid ah wadarta guud ee xaddiga kaydinta 44 lakh ee lagu aqoonsaday aagga.
Tani waxay kordhin doontaa awoodda qaadista kanaalka ka soo baxa Ningli ilaa Gantamulla illaa xNUMX tababbarka ka soo horjeedda awoodda jirta ee xariga 35000. Qalliinka qaabka ciidda iyo shubka ayaa u sameyn doonta dakhli waax weyn, ”ayuu raaciyay.
Wasiirka Amniga ayaa sidoo kale ku aasay Duuliye Chinar oo ku yaal Duabgah.
Sharci dejiye Muhammad Ashraf Ganai, Xoghayaha Xoghayaha PHE, BD Sharma, Injineer Madaxa, Waraabka iyo Xakamaynta Fatahaadaha, Kashmir, Gudoomiyaha horumarinta degmada Baramulla iyo saraakiil kale ayaa goob joog ka ahaa munaasabada.